Tenga Chinese Herbal Cream Yekurapa KweMuromo Chironda Pharyngitis & Mouth Freshener Spray - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Chinese Herbal Cream Yekurapa KweMuromo Chironda Pharyngitis & Mouth Freshener Spray
Chinese Herbal Cream Yekurapa KweMuromo Chironda Pharyngitis & Mouth Freshener Spray yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Model Nhamba: Oral Ulcer Cream
Item Rudzi: Chinese Herbal Cream
Type: Ulcer Kurapa Mwaya
Zita: Ulcer Spray
Chinhu: Propolis, licorice, clssanthemos, mint, uswa coral, cVitaminum C, borneol, chlorhexidine acetate, mvura.
Maitiro: Anoderedza marwadzo emuromo, Anochenesa muromo, anodzvinyirira mweya wakashata
Boka Rakakodzera: Mukuru
Usage: Mwaya pasi 2-3 nguva
NET: 30ml / bhodhoro
Zvironda zvemumuromo zvinonyanya kukonzerwa nekushaikwa kwevhitamini mumuviri, kudya zvisina kujairika, uye kudya zvisina hutano. Izvo zvinokanganisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva nebasa, uye zvichikonzera zvakawanda zvinokanganisa. Saka isu tinowanzo teerera kutarisiro yezuva nezuva.
Itching, uye nechando musoro.
Bvisa marwadzo, anti-bhakitiriya uye anti-kupisa.
Deredza kuneta kwepfungwa.
Kuchengeta Kwezuva Nezuva:
Teerera kune hutsanana hwemuromo uye dzivirira kukuvadza mukanwa mucosa.
Chengetedza nguva yakakwana yekurara uye dzivirira kuneta kwakanyanya.
Teerera kune zvemuromo utsanana.
Shandisa chikafu chine mavitamini.
Isa kamwene sprayer kunzvimbo yakakanganiswa mumuromo uye tinya mushonga wacho zvakananga
Dhinda 1-2 pfapfaidza nguva imwe neimwe, 3-4 nguva zuva nezuva Range inorwisa mabhakitiriya, kuchenesa, kugadzirisa matadza akakanganiswa uye mukanwa mucosa, akachena muromo wemuromo.
Paunenge uchishandisa ichi chigadzirwa:
Ichi chigadzirwa ibacteriostatic sanitary chigadzirwa
Izvo zvinorambidzwa kune avo vanokanganisa chigadzirwa ichi
1pc x Muromo Chironda Ruregerero Gel
Chinese mishonga yemushonga yemumuromo kubva kune maronda uye kuzvimba kwematadzo akaunzwa kwenguva yakareba kwazvo. Mhedzisiro yekushandisa rebad, panenge pasina hwema, kuravira hakuna kwazvakarerekera.
Iyo yekufapfaidza inoonekwa iyo yakasikwa. Asi kuravira kwacho hakufadzi. Semhedzisiro, kusvikira ndanzwisisa.
Iko kugona kwakazadzwa hafu, zvisati zvave zvakanaka, mushonga wakanaka.
Spray inogamuchirwa, hwema hwemakwenzi, kwete kutanhwa. Pakanga paine pasuru yakareba zvakakwana, izere nehashi, asi bhokisi rakakwinyika, asi balonchik ine mushonga iri muhurongwa.